Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fankasitrahana asa soratra. Voahosotra ho "Mpanoratry ny Taona 2018" Ravorombato - Gazety Ao Raha
Gazety Ao Raha, 07 Febroary 2019
Fankasitrahana asa soratra. Voahosotra ho Mpanoratry ny Taona 2018 Ravorombato
Nosoratan'i Fredo Rakotoarisoa, gazety Ao Raha, 07 Febroary 2019.
Hetsika fanaon'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) ny fanomezana mari-pankasitrahana ireo mpanoratra mendrika ao anatin'ny taona iray.
Fantatra ny anaran'ireo mpanoratra voafantina hifaninana hahazo ny anaram-boninahitra "Mpanoratry ny Taona 2018." AndriambavilanitrHetsika fanaon'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) ny fanomezana mari-pankasitrahana ireo mpanoratra mendrika ao anatin'ny taona iray. Vokatry ny fifantenana sy fitiavan'n olona ny sanganasan-dRavorombato dia izy no nandrombaka ilay amboara meneho fa voafidy ho Mpanoratry ny Taona 2018.
Rehefa natao ny tambatr'isa rehetra dia nahazo isa 145,1 izy, raha 139,4 kosa ny an'i Poète Rebelle, nifaninana taminy. Na teo amin'ny fitsarana nataon'ny rehetra na teo amin'ny fitsarana notontosain'ny mpitsara, dia tsikaritra fa nifanakaiky hatrany ny isan'ireto mpanoratra samy manana ny maha izy azy ireto.
Raha tsiahivina ny mombamomba an-dRavorombato dia Mpanoratra, Mpampianatra, Mpikabary izy. Filohan'ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo ihany koa izy. Manana ny mari-boninahitra Chevalier de l’ordre des arts, des lettres et de la culture. Maro ireo hetsika nampisongdina azy tamin'iny taona nivalona iny. Azony ohatra ny loka faharoa tamin'ny fifaninanana tantara nokarakarain'ny onjam-peo tsy miankina iray izay nampitondrainy ny lohateny hoe: "Lazaiko anao ny fahatsarany."